Garmin Forerunner 955 waxa uu bilaabmi karaa Sebtembar, raadad cusub ayaa soo jeedinaya - 【Comparison】 2022
Garmin Horgale 955 Ayaa Bilaabi Kara Bisha Sebtember, Tilmaamo Cusub Ayaa Soo Jeedinaya
Garmin waxaa lagu dejin karaa inuu sii daayo labo ka mid ah raad-raacayaasha jir dhiska Sebtembar iyadoo loo eegayo barnaamij cusub oo aqoonsiga FCC ah., oo leh miisaan cusub oo caqli badan sanadka dambe.
Laba codsi oo smartwatch ah ayaa la ogolaaday Luulyo 14, oo lagu daray codsiga miisaanka, laakiin maxay noqon karaan?
Bishii Noofambar 2019, horumariye indhaha aadka u fiirsada ayaa helay liis dheer oo qalabyo cusub oo qarsoon oo ku jira faylasha rakibaadda ee abka Garmin Connect. Qaar badan oo kuwan ka mid ah ayaa horeyba u diyaar ahaa iibka waqtiga la helay, qaar badanna waa la sii daayay (oo ay ku jiraan Garmin Tactix Delta Solar cusub).
Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira magacyo dhowr ah oo xiiso leh oo ku jira liiska, oo ay ku jiraan Garmin Forerunner 955 (ka dib markii loo yaqaan 'Forerunner 945') iyo Hordhac ah 745 (oo ah dhaxalka hore ee 735 XT).
Kaliya waxaan sameyn karnaa mala awaal ogeysiin ah halkaan, laakiin liiska aaladaha la ogaaday ee ku jira barnaamijka Garmin Connect waxaa ku taxan laba nooc oo loo yaqaan 'Forerunner 955' (heerka iyo LTE), sidaa darteed waxaan u janjeersanahay inaan aaminsanahay in kuwani ay yihiin labadii saacadood ee dhowaa. la ansixiyay.
Waxa kale oo jira sir kale oo isku dhafan: Muxuu noqon lahaa Garmin Forerunner 745 runtii? 735XT waa saacadda "miisaaniyadda" ee ugu iibsiga badan ee triathlon? Mid ayaa ku doodi kara in loo baahan yahay in la cusbooneysiiyo maadaama ay suuqa ku jirtay muddo afar sano ah.
Si kastaba ha ahaatee, dhowr saacadood oo khadka Garmin Forerunner ah ayaa xamili kara awoodaha triathlon, oo uu ku jiro Hordhac 645. oo yidhi. 645 waxaa lagu calaamadeeyay sida "watch tartanka" kaas oo sidoo kale xamili kara baaskiilka, orodka iyo dabaasha, halkaas oo 745 laga yaabo inay ka kooban tahay qaar ka mid ah shaqeynta triathletes kuwaas oo aan dooneynin inay ku qaataan culeyska sare ee khadka 945 ama Fenix ​​​​6.
Dukumentiga la socda Codsiyada FCC waxaa ku jira codsi ah in sawirada saacadaha cusub la ilaaliyo sir ilaa Sebtember 9, taas oo soo jeedinaysa tani waxay noqon kartaa taariikhda la filayo Garmin. Waan idinla socodsiin doonnaa marka aan wax badan ogaanno.
Su'aalo muhiim ah
Waxaan si hubaal ah u dhihi karnaa taas Miisaanka cusub ee smart ee liiska ku jira waa Tusaha Miisaanka 2 (ama Index S2), sida lagu sheegay aragtida qaraxday ee Garmin Connect APK. Miisaanka asalka ah ee Garmin ayaa la sii daayay 2015 iyo cusbooneysiintu waa daahday.
Sida ay soo wariyeen Gadgets & Wearables, dukumeentiyada miisaanku waxay soo jeedinayaan inaysan awoodi doonin oo kaliya inay xisaabiso miisaankaaga, BMI, bararka murqaha, boqolkiiba biyaha, bararka lafaha, iyo boqolkiiba dufanka jidhka, laakiin sidoo kale garaaca wadnahaaga iyo dhiiggaaga cadaadis.
Si kastaba ha ahaatee, Miisaanka ayaa la bilaabi karaa ka dib saacadaha cusub. Codsiga sirnimada ayaa taas codsanaya Sawirada waa qarsoodi ilaa Garmin uu si rasmi ah u muujiyo qalabka, ama 180 maalmood ka dib marka codsiga la aqbalo, Waxa dhacaya marka hore.
Codsiga FCC waa la aqbalay Luulyo 14, 2020, taasoo la macno ah in sawirada ay saaran yihiin cunaqabatayn ilaa Janaayo 10, 2021 ugu dambayn. Waxaan si badbaado leh u qaadan karnaa in Garmin uu doonayo inuu xakameeyo sii deynta S2 Index, sidaa darteed waxay qorsheyneysaa inay sii deyso kahor markaa.
Dhamaadka 2020 xaqiiqdii waxay ahaan lahayd wakhti wanaagsan oo la bilaabo miisaan cusub marka ay dadku bilaabaan qorshaynta go'aanadooda Sanadaha Cusub oo ay qorshaynayaan inay lumiyaan dhawr rodol bilawga sanadka cusub.
Heshiisyadii ugu fiicnaa ee Garmin ee maalinta:
Garmin - GPS Watch Forerunner 945 Xidhmada Triathlon Garmin
garmin wax adag; Gps gacanta baaskiil unisex qof weyn; Nooca ciyaaraha: orodka; Qaybaha lagu daray: GPS-ga gacanta lagu hayo + Buugga
LOKEKE Premium ilaaliyaha muraayadda dhalada ee Garmin Fenix ​​6/6 Pro Watch, oo la soo saaray
Xigasho: Nicholas Margot (Email ahaan).